Butterfly Staxx bụ a n'elu ohere mpere game dabere na a kpokọtara fairytale isiokwu nke ubi, butterflies na okooko osisi na-n'aka na-ị na-emechi ọdịdị. E nwere iri anọ paylines na egwuregwu a na-agbasa gafee ise-esi anwụde na atọ e nyere ahịrị. The-esi anwụde na-setịpụrụ megide backdrop nke a serene osimiri iyi na ugwu na ubi nke osisi na okooko osisi gburugburu. E nwere a mesmerizing music nyere na egwuregwu ga-eme ka gị na uche na ahụ nọrọ jụụ niile tinyere. Iji Wager na egwuregwu a, e na-a ịgba dị n'etiti £ 0,20 na £ 400 ọ bụla atụ ogho. The egwuregwu bụ playable na mobiles, mbadamba na desktọpụ kọmputa.
Banyere Mmepụta nke Butterfly Staxx
Nke a magically themed n'elu ohere mpere game e mepụtara site NetEnt. Ha bụ ndị ọsụ ụzọ nke online cha cha ohere mpere na n'elu iri afọ abụọ nke ahụmahụ. Ha kere ihe karịrị otu narị egwuregwu dị iche iche variants, onye ọ bụla na a ahụmahụ pụrụ iche na atụmatụ iji nyere Player merie ụfọdụ nnukwu ụgwọ ọrụ.
na nke a n'elu ohere mpere game, ị nwere ike igwu na yi nnọchianya nke dị iche iche na okooko osisi na a urukurubụba. The achasi urukurubụba bụ n'elu na-akwụ ụgwọ na akara na 60 ugboro nzọ gị. The red, Pink na violet sọrọ acha okooko osisi na-akwụ gị 40x mgbe ise nke a na ụdị ala na a payline. J, A, K na Q nke ebre kaadị na-akwụ obere ala stakes nke 20x ọ bụla. All na-enweta nkwanye na-atụle mgbe akara apụta si ekpe aka nri nke na-esi anwụde na ụdi ọnọdụ. E nwere ihe abụọ bonus akara enyere gị aka imeri si enwekwukwa atụmatụ. Ha bụ ihe atụ nke a ifuru na dị iche iche na agba nke petals na a lavender acha ifuru.
ego Wild: Ifuru dị iche iche dị iche iche na agba nke petals bụ anụ akara. Ọ na-anọchi ndị ọzọ niile ihe nnọchianya nke egwuregwu ma e wezụga onye na-akpali ndị ikposa.
Gbasaanụ daashi: The nnọchianya nke a lavender acha ifuru bụ ikposa nke a n'elu ohere mpere game. Ọ enọ ị 5, 6 ma ọ bụ 7 free egwuregwu na 3, 4 ma ọ bụ 5 akara landings. N'oge free spins, ị ga-esi naanị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ acha akwuru akara na-esi anwụde. All achasi ndị gbanwee n'ime eru butterflies na mgbe ahụ, ha ime ka oké ekpe nke-esi anwụde. All na-akwakọba butterflies enye dị iche iche merie n'ịgwa na ibu ụgwọ ọrụ na njedebe nke niile spins.
Na a yi pụtara ndịna na uche ịfụ atụmatụ, this n'elu ohere mpere game bụ nanị a na-emeso gị n'anya. Nke a bụ ihe kasị mma natured themed oghere na ihe RTP of 96.80%.